အက်ဒါ စကားပြေ - ဝီကီပီးဒီးယား
အက်ဒါ စကားပြေ (အင်္ဂလိပ်: Prose Edda) ကို အက်ဒါ အငယ်၊ စနော်ရီ အက်ဒါ အဖြစ်လည်းသိရှိကြ၍ သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုးရှင်းစွာဖြင့် အက်ဒါ ဟူ၍သုံးနှုံးနိုင်သော ဤစကားပြေသည် (၁၃)ရာစုအစောပိုင်းအတွင်း အိုက်စလန်၌ ရေးဖွဲ့ခဲ့သော ရှေးဟောင်းနော့စ် စာပေလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာပေလက်ရာကို အေဒီ (၁၂၂၀) ဝန်းကျင်ခန့်က အိုက်စလန် ပညာရှင်၊ ဥပဒေပြု/ထိန်းသိမ်းသူ (လွှတ်တော်သဘာပတိကဲ့သို့)၊ သမိုင်းပညာရှင် စနော်ရီ စတားလဆန်က ရေးဖွဲ့ (သို့) အနည်းဆုံး စုတုပြုခဲ့သည်ဟုယူဆကြသည်။ နော့စ်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်၍ ခေတ်သစ်အသိပညာဗဟုသုတအတွက် အပြည့်စုံဆုံး၊ အသေးစိတ်အကျဆုံးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။
ရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက် ဤရိုးရာဘာသာကိုးကွယ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ကမ္ဘာလောကနှင့် လူသားတို့အား ဖန်ဆင်းပုံများကို ဖော်ပြထားသော ခရစ်ယာန်သဘော နိဒါန်းဖြင့် အစပျိုးထားသည်။ ထို့နောက် နော့စ်စကြာဝဋ္ဌာသဘောတရား အခန်း၊ နော့စ်နတ်ဘုရားများနှင့် ဒဏ္ဍာရီများပါရှိသည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်လာသည်မှာ ထင်ရှားသော စာအုပ်သုံးအုပ်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့မှာ : Gylfaginning (အနီးစပ်ဆုံး စကားလုံး ၂၀,၀၀၀) ၊ Skáldskaparmál (အနီးစပ်ဆုံး စကားလုံး ၅၀,၀၀၀) ၊ Háttatal (အနီးစပ်ဆုံး စကားလုံး ၂၀,၀၀၀) တို့ဖြစ်ကြသည်။ (၁၃)ရာစု ခန့်မှ (၁၆)ရာစုခန့်ထိ လက်ရေးမူ ခုနှစ်ခုသည်လည်း အမှီအခိုကင်းသော စာပေဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနော်ရီသည် ၎င်းစုစည်းထားမှုများကို ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပြုရန်စီစဉ်ခဲ့၏။ အိုက်စလန် ကဗျာဆရာများ၊ စာဖတ်သူများကို အသံတူစ ကဗျာပါဒများ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကို နားလည်တတ်စေရန်နှင့် စကောလ်ဒစ်ကဗျာများတွင် သုံးနှုံန်းသည့် အက္ခရာများပေါင်းစပ်၍ ခိုင်းနှိုင်းတင်စားသည့် ပေါင်းစပ်စကားလုံးများစွာ၏ နောက်ကွယ်အနက်ကို နားလည်စေရန်တို့ဖြစ်သည်။
အက်ဒါ စကားပြေ ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မူလသဘောအရ အက်ဒါ ဟုရည်ညွှန်းခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း၌ ရက်ဂျီးယက်စ် လက်ရေးမူစာအုပ် (Codex Regius])ကို များစွာအခြေခံသည့် အက်ဒါ ကဗျာလင်္ကာ အစုအဝေးနှင့် ကွဲပြားစေရန် ခေတ်သစ်အစုအဝေးသဘောအဖြစ် အက်ဒါ စကားပြေဟုခေါင်းစဉ်တပ် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ရက်ဂျီးရက်စ် လက်ရေးမူသည် )၁၃)ရာစုခန့်က အက်ဒါ စကားပြေ ပြီးနောက် ဖွဲ့ခဲ့သော စာစုလည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်၌ အက်ဒါ (စကားပြေ) မူများက်ု အိုက်စလန်၌ ကောင်းစွာသိရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ပညာရှင်များက စနော်ရီသည် ၎င်းစကားပြေတွင် ကိုးကားပြုထားသော ကဗျာများပါဝင်သည့် အက်ဒါ အကြီး (ပိုစောသောအက်ဒါ) ရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆခန့်မှန်းကြသည်။
↑ John Lindow (17 October 2002)။ Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs။ Oxford University Press။ pp. 18–။ ISBN 978-0-19-983969-8။
↑ The Macmillan Encyclopedia (Rev. ed.)၊ London: Macmillan၊ 1983၊ p. 395
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဒါ_စကားပြေ&oldid=622610" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။